Waa kuwan casharada jacaylka ah ee laga xado taxanaha TV-ga aan jecel nahay - teles relay
Waa kuwan casharada jacaylka si aad uga xado barnaamijyadayada TV-ga ah ee aan ugu jecel nahay
Jacaylku mararka qaar wuu murgi karaa laakiin nasiib wanaag waxaan isku halleyn karnaa kulamada isreebreebka si ay noo siiso casharo aan xad lahayn!
Jaceylku inuu ahaado badanaa farxad saafi ah. Way fududahay markaad xaaladan kujirto, waad sareysaa oo waxaad ku nooshahay noloshaada ugufiican. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma ahan wax iska cad oo waxaa dhacda in muran iyo ismaandhaaf ay dhex galaan. Xitaa haddii aan aad u jecel nahay nuskeenna kale, waxaa dhacda inaynaan hadda ka dib garanayn wixii aan samayn lahayn si aan xaaladda u hagaajino ama aan si fudud ugu fahanno. Wayna sii adkaanaysaa markii aad qof si qarsoodi ah u jeclayd muddo dheer. Haddii jilayaashan taxanaha ahi ay ka badbaadeen tijaabooyinkii ugu xumaa, Trendy waxay kugu martiqaadeysaa inaad ku soo noqoto casharradii jacaylka ee taxanihu na baray. Ha ka waaban inaad codsato qaar ka mid ah nolosha dhabta ah!
Kuwa kale khaladkooda ha daayaan
Way fududahay in la yiraahdo, way adagtahay in la sameeyo. Si kastaba ha noqotee, way fiicantahay inaad kan kale dhiirigeliso oo aad siiso dhammaan taageeradiisa halkii aad si joogto ah ugu celin lahayd inuu qalad sameynayo adiguna aadan oggolayn. Xilliga 3-aad ee Dawson, Joey wuxuu jeclaadaa arday iyadoo weli ku jirta dugsiga sare oo keliya. Jacaylkoodu wuxuu ka bilaabmaa saldhigyo aad u adag tan iyo markii ay ku kala beddelaan laba adduunyo oo kala duwan. Dhinaceeda, Pacey waxay bilaabeysaa inay si dhab ah dareento dareemo iyada..
Laakiin halkii uu khudbad ka jeedin lahaa oo uu eedeyn lahaa, wuu dhiirrigeliyaa oo xitaa wuxuu noqonayaa kan ugu horreeya ee halkaas u jooga marka ugu dambeyntii lammaanuhu ay u maraan wadooyinkooda kala duwan. Kadib, wuxuu maamuli doonaa inuu guuleysto qalbigiisa. Marka la soo koobo, jacaylku wuxuu ka kooban yahay qaddar wanaagsan oo saaxiibtinnimo iyo taageeridda kan kale ayaa ka mid ah saldhigyada xiriirka guuleysta.
Farxada kale ee ka sareysa
Markaad qof jeceshahay, ma ahan inaad danaysato oo aad u ogolaato inay faraxsan yihiin xitaa haddii taasi macnaheedu tahay aqbalida inaad aragto iyagoo socda. Tani waa sida saxda ah waxa ku dhacaya Peyton bilowga The Brothers Scott Season 4. Waxay u timid inay ogaato inay weli jeceshahay Lucas laakiin iyada oo og in uu jecel yahay Brooke, waxay sameyn doontaa wax kasta oo ay isku daydo inay isu keento oo ay u oggolaato inay dib isugu soo noqdaan.
Waxay xitaa gaari doontaa inay aamusiso dareenkeeda si aysan ugu tanaasulin xiriirkooda jacayl. Waa allabari weyn! Muddo ka dib, Lucas wuxuu ugu dambeyntii ogaan doonaa inuu jacayl la leeyahay Peyton oo ay xitaa guursan doonaan dhammaadka xilli ciyaareedka 6 ee taxanaha. Waxay unoqonaysaa inay muujiso in badhaadhe iyo danayn la'aantu ay wax tari karto!
Soo bandhigida dareenkaaga ayaa cadeyn u ah geesinimada
Badanaa, markaan ogaanno inaan jacayl ku jirno, waxaan ka baqeynaa inaan u sheegno qofka la jecel yahay. Runtii, markasta ma sahlana in seddexdan erey qof loo dhaho xitaa kaba sii badan hadaadan xiriir la laheyn qofkaan.. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii dhicitaanku xanuun yeelan karo, waxay sidoo kale kuu horseedi kartaa burburkaaga inuu kuu muujiyo dareenkooda markaba. Qofka aan waxba isku dayin waxba ma laha sida ay yiraahdaan. Intaa waxaa sii dheer, Lexie Gray waxay ku dhamaysatay geesinimadeeda labada gacmood si ay ugu sheegto Mark Sloan inay ku jeceshahay bayaan aad u qurux badan oo aan wali qabow ku jirno oo kaliya aan ka fikirno. Qeyb yar oo laga soo qaatay 'Grey's Anatomy' oo hadda laga sii daayo ABC:
" Waan ku jeclahay. Aad baan kuu jeclahay. Anigana waxaan kaa helay maqaarkayga hoostiisa. Waxay u egtahay inaad tahay cudur. Waxa igu dhacay Mark Sloan. Aniguna waxba ma qaban karo laakiin waxaan kaa fikirayaa, ma seexan karo mar dambe. Ma neefsan karo mar dambe. Mar dambe ma cuni karo. Anna waan ku jeclahay. Waan ku jeclahay daqiiqad kasta oo maalin kasta ah waana ku jeclahay adiga. "
Ku aqbal midka kale si buuxda khaladaadkooda iyo sifooyinkooda
Marwalba ma sahlana in la gaaro laakiin waa aasaas. Ma jiro qof kaamil ah, adiga iyo qofka aad jeceshahay toona. Sidaa darteed waa inuu si buuxda u aqbalaa, oo ay ku jiraan dhinaciisa mugdiga ah, maxaa yeelay waxay isaga ka dhigaysaa sida uu yahay maanta. Haddii aad go'aansato inaad xiriir la yeelatid qof, waa inaadan isku dayin inaad beddesho xitaa haddii ay xaaladdu adag tahay. Tani waa waxa Elena u suurtagashay inay ku sameyso Damon Qaybaha Vampire. Qalad wuu sameeyaa! Sikastaba ha noqotee, gabadha yari waxaay ku danbeysaa laqabsashadeeda dhankeeda ah, kalgacal iyo faannimo leh.
Wanaagsan, waxay ku guuleysatay inay qanciso, kan dhibaatada badan ka soo gaadhay arrintiisa Katherine. Marka la soo koobo, mararka qaarkood waa inaad la kulantaa xaqiiqooyinka: waan jecel nahay dadka inkasta oo khaladaadkooda xitaa haddii aad ka filayso inay sameeyaan dadaalo lagu horumarinayo.
Daacad ahaanshuhu waa furaha xiriir miisaaman
Beenta ayaa isla markiiba hoos ka dhigeysa xiriir jaceyl. Waxaa fiican in runta la hadlo lana dhiso lamaane aasaas caafimaad qaba oo adag. Waadna naga aamini kartaa, kalsoonidu waa furaha xiriirka isku dheelitiran. Ha iloobin in beenta iyo daboolida ay yihiin waxa ugu yar ee ku kacaya Oliver xiriirkiisa Felicity arrow. Marka, halkii uu ku kalsoonaan lahaa, wuxuu doorbiday inuu ka qariyo in uu wiil leeyahay. Nasiib darrose, ma ahayn markii ugu horreysay. Gaar ahaan tan iyo markii uu sii waday ficilkiisa isaga oo aan waligiis la tashan, iyada oo aan runtii ku jirin noloshiisa.
Gabadha yari waxay sidaa darteed doorbidday inay isaga tagto halkii ay la joogi lahayd nin aan daacad ka noqon karin iyada. Xaqiiqdii, Oliver wuxuu bartay inuu kaliya isku halleeyo Lian Yu, laakiin waxaan si cad u fahmaynaa sababaha Felicity. Haddii wax walba hagaagaan dhinaca jacaylka, waxaan kugula talineynaa inaad daawato taxanaha Bangiyada Dibadda, taxanaha Netflix ee qof walba ka hadlayo.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka ugu horreeya: https://trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferees-a4805.html
miisaaniyad adag? Halkan waxaa ah 6 cunto-caafimaad, oo si-fudud looga dhigi karo kaliya 5 waxyaabood